WAR CUSUB: Shariif Xasan oo Amar Culus dul dhigay Xildhibaanada K/Galbeed kadib Go’aankii maanta… – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda maamulka Koonfur galbeed Somalia oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa amar lagu siiyey ineysan qaadan kaararka aqoonsiga oo bixintoodu ay ka socoto xarunta Villa Baydhabo.
Qaar ka mid ah xildhibaanadan oo magacooda ka gaabsaday ayaa sheegay in amarkan uu ka yimid Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Somalia Shariif Xasan Shiikh Aadan oo haatan ku sugan magaalada Baydhabo.
“Shariif Xasan wuxuu amar nagu siiyey inaanan qaadan kaararka aqoonsiga iyo shahaadooyinka inta laga xalinayo shan ka mid ah xildhibaanada bay iyo Bakool oo ka mid ahaa 11 xubnood oo guddiga xalinta khilaafaadku ay diideen doorashadii ay ku soo baxeen, iyagoo sheegay in dib loogu laabanayo” ayuu yiri xildhibaan ka tirsan kuwa ka soo jeeda Koonfur Galbeed.
Xildhibaanada qaarkood oo maanta xarunta Villa Baydhabo u tegay qaadashada kaararka aqoonsiga ayaa la sheegay iney dib uga soo laabteen halkaas ka dib markii lagu wargeliyey amarka uu soo saaray Shariif Xasan.
Wararka ayaa sheegaya in Shariifku diidan yahay qoraalka ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka ee lagu laalay shan ka mid ah xildhibaanada lagu soo doortay Baydhabo ee haatan jooga Muqdisho.
Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka dadban ee maamulka Koonfur galbeed ayaa ku gacan seyray qoraalka guddiga xalinta khilaafaadku ku diideen shan ka mid ah xildhibaanadii lagu doortay Baydhabo.
Guddiga ayaa sheegay in xubnaha lagu soo celiyey ay ka dambeyso siyaasad iyo musuq-maasuq, iyagoo intaa ku daray ineysan ku laabaneynin doorashada xubnaha la soo celiyey.
Previous: Al shabaab raids military base near Qoryoley town
Next: Sawirro: Wiil isku dayey inuu toogasho ku dilo Donald Trump oo la xukumay